Afaka manome serivisy namboarina tamin'ny pulley Mc nylon avo lenta amin'ny fanao isan-karazany sy ny fepetra arak'izay takiana. |
Anaran'ny vokatra: Pulsil nylon an'ny seranan-tsambo fanodinana seranan-tsambo: famolavolana tsindrona / fanodinana centrifugal / fanodinana CNC
1 Mavesatra maivana sy fananganana mety.
2. Manohitra ny harafesina sy ny insulation.
3. Ahenao ny tabataba sy ny hovitrovitra rehefa ampiasaina.
Fahaiza-mamatsy: vano nylon 3000 ho an'ny vano seranana isam-bolana
Previous: manome serivisy namboarina amin'ny pulley nilona avo lenta avo lenta amin'ny fomba sy fika isan-karazany arak'izay takiana
Manaraka: Famindrana indostrialy hamokatra kodiarana fitaritana nilona avo lenta
Tavoahangy fehikibo nylon
Kodiarana nilona pulley kely